Maungtintyin: အလိုဆန္ဒဟူသည် တိုးချဲ့ဖို့ရန် ကြီးမားတဲ့ တောင့်တမှုတစ်ခုကို ဆိုလိုသည်
အလိုဆန္ဒဟူသည် တိုးချဲ့ဖို့ရန် ကြီးမားတဲ့ တောင့်တမှုတစ်ခုကို ဆိုလိုသည်
အလိုဆန္ဒခေါ်တဲ့ စွမ်းအင်ကို ရာစုနှစ်ကြာအတွက် ပြစ်တင်ဝေဖန်ရှုတ်ချပြီးပါပြီ။ သူတော်စင်လို့ခေါ်တဲ့သူ အားလုံးနီးပါးက အဲဒါကို ဆန့်ကျင်ပြီးပါပြီ။ အကြောင်းက အလိုဆန္ဒဟာ ဘ၀ ဖြစ်ပြီး အဲဒါတွေအားလုံးက ဘ၀ရဲ့ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အလိုဆန္ဒဟာ သင်တွေ့မြင်ရတဲ့အရာအားလုံးရဲ့ တကယ့် ရင်းမြစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီအရာတွေက သိသာမြင်သာတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ ဆန့်ကျင်နေလို့ပါ။
အရာဝတ္ထုမရှိတဲ့အလှိုဆန္ဒ- ပန်းတိုင်ကို ဇောင်းပေးထားခြင်းမရှိတဲ့အလိုဆန္ဒ- စေ့ဆော်မှုမရှိတဲ့အလိုဆန္ဒ- သန့်ရှင်းတဲ့အလိုဆန္ဒဟာ ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလိုဆန္ဒကို ဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်။ အဲဒါကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အလိုဆန္ဒကို လွတ်ချဖို့မဟုတ်။ အဲဒါကို ပြောင်းလဲဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ တကယ့် ဖြစ်တည်ခြင်းဟာ အလိုဆန္ဒ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ဆန့်ကျင်ဖို့ သင်ကိုယ်ကို ဆန့်ကျင်ဖို့နဲ့ အားလုံးကို ဆန်ကျင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ပန်းပွင့်များ- ငှက်များ- နေနှင့်လကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအားလုံးကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အလိုဆန္ဒဟာ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့မှာ ဖန်တီးဖို့ဆန္ဒ- ထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆန္ဒ- တစ်ခုမှအများသို့ ပြုလုပ်ဖို့ဆန္ဒ- ချဲ့ကားဖို့ဆန္ဒ အဲဒီ အလိုဆန္ဒတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် God ဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်- လို့ သူတို့ပြောဆိုတဲ့အခါ Eastern ကျမ်းဂန်များက အတိအကျ မှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တင်စားမှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ Godဟာ အလိုဆန္ဒမှ သီးခြားမဟုတ်ပါ။ အလိုဆန္ဒဟာ တောင့်တမှုတစ်ခု- ကြီးမားတဲ့တောင့်တမှုတစ်ခု- ချဲ့ကားဖို့- ကောင်းကင်ကျယ်သလောက် ကျယ်ပြန့်လာဖို့ကို ဆိုလိုပါတယ်။
ငွေကြေးပို၍ပို၍ရှိချင်တဲ့သူဟာ တကယ်လိုချင်တဲ့အရာဟာ ငွေကြေးမဟုတ်ဘဲ ချဲ့ကားခြင်း တိုးချဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းက ငွေကြေးက တိုးချဲ့သော ချဲ့ကားသော သင့်ကို ကူညီနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ အကြီးမားဆုံး အိမ်တစ်လုံး ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ အကြီးမားဆုံးပန်းခြံတစ်ခု ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပိုင်နက် နယ်မြေဟာ အကျယ်ပြန့်ဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုဟာ အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ငွေကြေးနောက်လိုက်တဲ့သူဟာ သူဟာ ဘာ့ကြောင့် ငွေကြေနောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ပါ။ သူ့ရဲ့ မသိစိတ်ထဲသို့ နက်နက်နဲနဲသွားကြည့်လိုက်ပါ။ ကမ္မဌာန်းထိုင်ဖို့ သူ့ကို ကူညီပါ။ ပြီးတော့ - ငွေကြေးအတွက် အလိုဆန္ဒဟာ တကယ်တော့ ငွေကြေးအတွက် အလိုဆန္ဒမဟုတ်။ အဲဒါဟာ ချဲ့ကားဖို့ တိုးချဲ့ဖို့ အလိုဆန္ဒသာ ဖြစ်တယ်-ဆိုတာကို တွေ့လာရတဲ့အခါ သူ့ကို အံသြစေပါလိမ့်မယ်။
အခြားအလိုဆန္ဒအားလုံးအပါအ၀င် အကြောင်းရင်းက တူညီပါတယ်။ လူအများဟာ တန်ခိုးတွေ- ကျော်ကြားမှုတွေ လိုချင်ကြတယ်။ အသက်ရှည်ချင်ကြတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီခြားနားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာ သူတို့ ဘာကို လိုချင်နေတာလဲ? တူညီပါတယ်။ တိတိကျကျကို တူညီပါတယ်။ သူတို့ဟာ များစွာလိုချင်ကြတယ်။ သူတို့ဟာ ကန့်သတ်မှုဘောင်ကို မထိန်းသိမ်းချင်ပါ။ သူတို့ဟာ အကန့်အသတ်ကို မလိုချင်ပါ။
သင် အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုတာကို ခံစားကြည့်ဖို့ စိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်။ အကြောင်းက သင် အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုလျင် အဲဒီအခါမှာ သင်ဟာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုမျှသာ ဖြစ်နေလို့ပါ။ လူသုံးကုန်တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်နေလို့ပါ။
ဒါပေမယ့် အလိုဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒီအရာဝတ္ထုတွေဟာ အနှေးနှင့်အမြန်ဆိုသလို စိတ်ပျက်စေပါတယ်။ ငွေကြေးဟာ တစ်နေ့ ဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချဲ့ကားခြင်းကတော့ ဖြစ်ပေါ်လာ သေးတာမဟုတ်ပါ။ သင်ဟာ ရွေးချယ်မှုအတွက် အနည်းငယ်ထက်ပိုတဲ့လွတ်လပ်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားရကျေနပ်မှုတော့ မရှိနိုင်။ အလိုဆန္ဒဟာ အဆုံးမရှိအနန္တ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေကြေးက အဆုံးမရှိအလွန့်အလွန် မ၀ယ်ယူနိုင်ပါ။
သင် သတိထားကြည့်လျင် ငွေကြေး- ပါဝါ- သြဇာတိက္ကမ တစ်ခုမှ အားရကျေနပ်အောင် ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်။ တစ်ခြားစီ ပြောင်းပြန် အဲဒါတွေက အားရကျေနပ်မှုမရှိအောင် သင့်ကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲ? ဒါဟာ သင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးစဉ်အခါ တစ်နေ့ ငွေကြေးဟာ ဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်၊ အဲဒီအခါ သင်ဟာ စိတ်အေးလက်အေး ဖြစ်မယ်၊ သက်သောင့်သက်သာရှိမယ်၊ ပျော်ရွှင်လာလိမ့်မယ်- ဆိုတာကို မျော်လင့်ချက်ရှိခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု အဲဒါက ဖြစ်ပေါ်လာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်းရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတ ဖြစ်လာပုံမပေါ်ပါ။ သင်ဟာ ရှေ့ကထက် ပိုလို့တောင် စိတ်ဖိစီးပါတယ်။ သင်ဟာ ရှေ့ကထက် ပိုလို့တောင် စိုးရိမ်မှုတွေ များလာပါတယ်။
အလိုဆန္ဒကိုယ်တိုင်ကတော့ မမှားယွင်းပါ။ ငွေကြေ- ပါဝါနဲ့ သြဇာတိက္ကမတွေဟာ မှားယွင်းစွာ အလိုဆန္ဒက ဦးတည်ရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ဓားတစ်လက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်ဟာ ဓားကို အပြစ်မရှိအောင် အမှားမရှိအောင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို သတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ ဓားဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အလိုဆန္ဒကို သန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ရပါ့မယ်။ ပြီးတော့ ပြောင်းလဲရပါ့မယ်။ အကြောင်းက အဲဒါဟာ သင်ရဲ့ စွမ်းအင် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ အခြားတစ်ခုခု စွမ်းအင် မရှိပါ။ အလိုဆန္ဒကို ပြောင်းလဲဖို့ သာမန်ဖြစ်တဲ့ လမ်းကတော့ အရာဝတ္ထုများကို ပြောင်းလဲဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးနောက်ကို မသွားပါနဲ့။ ဓမ္မနောက်ကို သွားခြင်းကို စတင်ပါ။
အလိုဆန္ဒရဲ့မျိုးစေ့မရှိပါ။ အကြောင်းက အလိုဆန္ဒဟာ အားလုံးရဲ့မျိုးစေ့ ဖြစ်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အလိုဆန္ဒဟာ အရာရာတိုင်းရဲ့ မူလအခြေခံမျိုးစေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စွမ်းအင်များကို ပြောင်းလဲဖို့ အစပြုပါ။ တဖြည်းဖြည်း သူ့ဆန္ဒအလျောက် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းများကို သင် မြင်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Monday, January 31, 2011
အောင်မြင်မှုနှင့် ကျရှုံးမှုဟာ ဘ၀ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ အဲဒါက တစ်ခုတည်းသော ဒင်္ဂါးရဲ့ ဖက်နှစ်ဖက်ပါ။ အောင်မြင်မှုနှင့် ကျရှုံးမှုဟာ ယန္တရားလည်ပတ်...
သူတို့ ဆိုစကား (2)
ရေးခဲ့ပြီးသော ဘာသာရေးဆောင်းပါးများ (14)
အလိုဆန္ဒဟူသည် တိုးချဲ့ဖို့ရန် ကြီးမားတဲ့ တောင့်တမှုတ...
ဘ၀ဟူသည် ရှင်သန်ခြင်းအတွက် ဖြစ်သည်
ကြည်ကြည်သာသာနှင့် Goodbye လို့ ပြောဆိုလျှက်…
အကျိုးတရားက ဘယ်လိုသက်ရောက်ပါစေ အကြောင်းမဟုတ်ပါ-ြ...
အကျွန်ုပ်တို့သည် အကျွန်ုပ်တို့ဘ၀ကို ဖန်တီးသည်
- ဓမ္မဆိုဒ်များ - BPS ဗုဒ္ဓနက်တ် နိဗ္ဗာန ဓမ္မအသံ DLV ရှေးဗုဒ္ဓဘာသာ ဓမ္မ ဓမ္မ E-Talk တရားတော်များ
- ပြည်ပသတင်းရေဒီယို - ဘီဘီစီ ဗွီအိုအေ အာရဖှေ် ဒီဗွီဘီ မိုးမခ
- ပြည်ပသတင်းဌာနများ - ခေတ်ပြိုင် ရိုးမ မိုးမခ ဧရာဝတီ မဇ္ဈိမ
- နည်းပညာဆိုဒ်များ - ကိုဇော်၏ နည်းပညာ သံလုံငယ် မောင်စေတနာ မောင်နိုင် ကိုရင်ပြည့်စုံနှင့်... မနေသား မြန်မာ IT မိုးထက်မြင့် မောင်ကျော်စွာငြိမ်း ကွန်ပျူတာဗဟုသုတ KP-3 နည်းပညာ IT Men's Blog ရန်အောင် MM-helpdesk ညီနေမင်း Saturngod ရဲမာန် Ogree မြန်မာ့သတင်းနည်းပညာ ဘလော့ဂ် Templates BTemplates E-Templates IC-Templates Moharam-Templates Free-Templates ၀ဘ် Templates ဒဇိုင်းနာ ကုဒ်ဂုရု ၀ဘ်ဒီဇိုင်း My Space စာဖိုင်မှအသံဖိုင်သို့
- စာအုပ်စာပေဆိုဒ်များ - နေ့သစ် ရွှေစကား စကားဝါမြေ မြန်မာစာအုပ်များ အခမဲ့စာအုပ်ဆိုင် ၀ိညာဉ်သစ်စာကြည့်တိုက် မြန်မာတို့တွက်စာအုပ် ဗမာ့ဂန္ထ၀င် မျှဝေလိုသောစာအုပ် အခမဲ့စာအုပ်များ မြန်မာ့စာကြည့်တိုက် စာအုပ်စာတမ်း ဘုံစာကြည့်တိုက် မဂ္ဂဇင်း အီးစာအုပ်များ မြန်မာပြည်သား မြန်မာ CC မြန်မာပိုင်အိုနီးယ်း
- ဘာသာစကားဆိုဒ်များ - SPရေဒီယို ဘာသာစကား သင်ယူရာ သင်ရိုး အင်္ဂလိပ်စာ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပါ အခမဲ့ဘာသာပြန်ပေး
- ဖျော်ဖြေရေးဆိုဒ်များ - သံရုံးများ တီထွင်သူများ ကာရာအိုခေ မြန်မာ MP3 ဘောလုံးချစ်သူများ
သမီး ဂရီတာ သို့ ပေးစာ (၃)
ငြိမ်းချမ်းစေရာ ဓမ္မကထာ (၂) - ကြီးမားတဲ့ အသိဉာဏ် -
အသိဉာဏ်မြင့်မှ စိတ်ထားမြတ်မည် တရားတော်
ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သက်တော် (၈၀) ပြည့် ပတ္တမြားရတု အထိမ်းအမှတ်
HIV ကို အန်တုလို့ အသက်ဆက်ရှင်သန်အောင်နေထိုင်ကာ ချစ်ရသူ ယောင်္ကျားလေးနှင့် လက်ထပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ အာဂသတ္တိ
Pannaparami Educational Foundation
ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု အခြေပြုသင်တန်း (၃-၂၄-မှ-၄-၇-၂၀၁၃)
သာသနာကိုယ်မှာရောက် ၊ ဘေးတွေကွယ်ပျေက်
ဂျာမဏီ ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
International Buddhist Education Center
SEND6 - Send large files
The State Pariyattisāsana University ( Yangon)
English to Myanmar online dictionary at MyOrdbok
Welcome to Buddhist Publication Society